Qaramada Midoobey iyo Maraykan oo cambaareeyey afduubkii ra'iisalwasaaraha Liibiya - BBC Somali - Warar
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 11 Oktoobar, 2013, 09:01 GMT 12:01 SGA
Jamciyadda Qaruumaha ka dhaxaysa, dawladaha Maraykanka, Ingiriiska iyo Faransiiska ayaa dhammaan cambaareeyey afduubkii shalay lagula kacay ra'iisalwasaaraha dalka Libya Cali Seydaan. Xoghaya arrimaha debadda ee Maraykanka John Kerry waxa uu falkaasi afduubka ku tilmaamay mid "budhcadnimo" ahaa. Dawladda dalkan Ingiriisku ayaa iyana shalay si weyn u cambaaraysay afduubkaasi ra'iisalwasaaraha, kuna baaqaday in isla markaaba si dhakhso ah loo sii daayo. Xogahaya guud ee Qaramada Midoobey waxa uu isna ugu baaqay dhammaan dadweynaha reer Liibiya in la dhawro sharciga iyo deganaanshaha.
Ra'iisalwaraaha Libya, Cali Saydaan ayaa isna ammaanay kooxihii soo badbaadiyey, waxanu ugu baaqay dhammaan dadweynaha iyo kooxuhuba inay isdejiyaan.
Cali Seydaan waxa shalay laga afduubay hudheel ku yaalla magaalada madaxda Daraabulus amma Tripoli ee dalka Liibiya, waxana la sheegay inay halkaasi ka kaxaysteen ra'iisalwasaaraha koox dabley ah oo hubaysani saaka saacadihii hore
Xiisad weyn oo ka taagan Saax Dheer